Qaama miidhamaa gammoojjii Saaharaa mo'ate - BBC News Afaan Oromoo
Qaama miidhamaa gammoojjii Saaharaa mo'ate
Image copyright Yemane
Goodayyaa suuraa Qabsa'aa Yamaanee Giilaagaabiri gammoojjii Sahaaraa da'imman isaa qabate imale
Waggoota 13 dura qabsoo bilisumaaf taasifamee irratti hirmaachuun waraanichaan miila iisaanii tokko tokko dhaban lammiileen Eritiraa qabsaa'aa Aabbede Tasfaayii fi Yamaana Giilaagaabirin nageenya isaanitiif soodaachuu baqatan.
Isaanis karaa seeraan alaatiin daangaa qaxxaamuruun rakkina cimaan bara 2003tti gara Suudaan galan.
Namoonni muraasni carraa gaarii fi barnootaaf kan baqatan ta'ulleen, irra caalaan garuu sababiin nageenyaa, walitti bu'insaa, hacuuccaa fi sarbama mirgoota mamoomaatiin akka baqatan Dhabbanni Motummoota gamtomanii kaa'eera.
Qabsaa'oonni kunis sababii siyaasaatiin baqatan. Waraana bara 1998 hanga 2000tti Eritiraa fi Itoophiyaa jidduutti gaggeefamuun lubbuu dargaggoota kuma hedduu galaafachuun waliigaltee Aljeersiin dhaabateen booda waan heedduun ta'e ture biyyatti keessatti. Ministiroonnii fi janaraalootiis haalicha gamagamuun ejannoo manni mari biyyaaleessa bara 1997tti ragaasisee hojiirra yaa olchiinu gaaffii jedhu kaasan.
Wayita kanattis Aabbedee fi Yamaanee deegartoota yaada kanaa turan. Haa ta'u malee gama motummaatiin namoota faallaa isaa dhaabatan qabanii hidhuun eegalame. Kanaafu isaanis lubbu isaanitiif soodaachuun biyyaa baqatanii bahan.
Image copyright Abede
Goodayyaa suuraa Qabsaa'aa Aabbedee Tesfaay
Fuulbaana 2001'ttis namoonni yaada kana ni gaggeessu jedhamuun shakaman hunduu hidhaman. Aabbedeenis namoota isa beekan jalaa dhokachuun maatii isaa dhiisuun gamoojjii Eritiraa miillaan osoo hinhafne qaxxaamuruun Kartum gale. Daandiirrattis busaan akka isa qabee ture illeen ni dubbata.
Qabaa'aa Yamaanees daa'ima isaa ji'a sadii, ijoollee isaa sadanii fi haadha warraa isa qabatee osoodhuma kufee ka'uu rakkoo nageenyaa yaaddessaa keessa darbuun Sudaan Gahe. Hawwiin abbaa seenaa kanaa dhumni godaansa isaanii Sudaan akka ta'u ture.
Hanga haalonni sirrataniifii jijjiiramni dhufutti Sudaan turu kan yaadanii turan ta'us achittis halli rakkisaa ta'uusaatiin imala gammoojji sahaaraa isa hamaa eegaluuf murteessa.
Aabbedee fi Yamaaneen imala gammoojjii sana gaddaan yaadatu. Lameen daandiin qaxxaamuran walfakkaataa ta'us yeroon itti imalan gargari. Muudannoon isaanis akkasuma.
Aabbedeen namoota walirratti fe'amanii imalan waliin imale. Yemaaneen ammo miseensota maatii isaa shan qabatee lammiilee Eertiraa biro 10 waliin kankolaataa irrakeessatti nama fe'attte keessa taa'uun gammoojjii san qaxxaamuran.
Lameenuu daandii isaaniirratti hammeenya godaansaarraa kanaka'e reeffa namoota gammoojjiin sun liqimsee laalaa darban. Kaayyoon sabaa waggoota 20f qabsa'aaniif dhumaratti godaansaaf isaan saaxiluun isaa garaa isaan nyaachaa imalan.
Gammoojjii sana osoo qaxxaamuranii Aabbedeen reeffa namoota dheebuun du'an keessaa waraqaa eenyummaa fira isaa argu gaddaan yaadata. Qabsa'aa Yamaanees konqolaata hojiin ala taate tokko keessatti reeffa heddu arguu dubbata.
Image copyright Ymane
Qabsa'aa Yamaanees daa'ima isaa ji'a sadii, ijoollee isaa sadanii fi haadha warraa isa qabatee osoodhuma kufee ka'uu rakkoo nageenyaa yaaddessaa keessa darbuun Sudaan Gahan. Hawwiin abbaa seenaa kanaa dhumni godaansa isaanii Sudaan akka ta'u ture.
Hanga haalonni sirrataniifii jijjiramni dhufutti Sudaan turu kan yaadanii turan ta'us achittis halli rakkisaa ta'uusaatiin imala gammoojji sahaaraa isa hamaa eegaluuf murteessa.
Aabedee fi Yamaaneen imala gammoojjii sana gaddaan yaadatu. Lameen daandiin qaxxaamuran walfakkaataa ta'us yeroon itti imalan garggari. Muudannoon isaanis akkasuma.
Aabbedeen namoota walirratti fe'amanii imalan waliin imale. Yemaaneen ammo miseensota maatii isaa shan qabatee lammiilee Eertiraa biro 10 waliin kankolaataa irrakeessatti nama fe'attte keessa ta'uun gammoojjii san qaxxaamuran.
Gammoojjii Sahaaraa qaxxaamuruuf Aabbedeetti torbee lama Yamaaneetti ammo ji'a tokko itti fudhateera.
Liibiyaa galuuf wayita guyyaan took isaan hafu konkolaatonni lameen godaantota kunneeniifi kanneen biroo fee'an caban. konkolaataa biraa godaantota biroo Liibiyatiin gahee deebi'aa jiru argannaana Yemaaneen maatii isaa qabatee godaantota biro waliin qarshii dabalataa kanfaluun Liibiyaa seenan. Erga Libiyaa seenee namoonni hedduun liibiyaa osoo hin seeniin hafuu dhagayuusaas dubbata.
Aabbedeen imala isaa gammoojjii sana caala hamaadha jedhe kan ibsu bakka konkolaatan isaanii cabe irraa ka'ee Liibiyaa galuuf km 20 millaan deemuu dadhabee ulee qabatee Liibiyaa galuu isaati.
Ji'oota afuriif hanga dhahi galaanaa gadi galutti Liibiyaa erga turanii booda imala isa lammataa eegaluuf yeroon geesse. Si'a lama galaanarraa erga deebi'anii booda imala sodaachisaa fi yaaddessaa sa'aa 72 booda Itaalii gahan. Achiis Aabbedeen gara Hoolaand, Yemaaneen ammo Swiizerlaand galan.
Mudde 18 guyyaa itti baqattoota Aafrikaa carraa godaansan argatanitti akka fayyadamaniifi barnoota goodansa kanarraa argatan itti qoodaniidha.
Guyyaa kana sababeefachuun mootummoonni fi dhaabileen mariif taa'an gurgurtaa garbaa Liibiyaatti adeemsifamaa jiru irratti akka xiyyeefatanii fi furmaata akka itti kennaniis godaantonni kunniin gaafataniiru.
Image copyright Yamaanee
Goodayyaa suuraa konkolaataa baqattoota fee'ee gammoojjii Saharaa keessatti cabe
Mudde 4 bara 2000 dhimma godaantotaarratti mariyatee kan turee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii mudde 18 guyyaa baqattoota Addunyaa akka ta'u murteeseera. Isa dura bara 1990 mirga hojjettootaa fi maatii isaanii eegsisuu mirkaneessee ture.
Godaansa idil-addunyaa dabalaa jiru to'achuuf sirna cimaa lafa ka'uu, mirgoota namoommaa isaanii kabachiisuu, baqattoonni akka sosocho'an hayyamuufi walgargaarsa biyyoolessaa fi naannawaa cimsuu irratti biyyonni miseensa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 132 waliigalteerra gahanii turan.
Amma kan barbaachisu waliigaltee kana hojiirra oolchuu dha jedhu namoonni seenaa isaanii qoodan kunniin.
Viidiyoo "Yeroo sadi na gurguratan"
Har'a guyyaan godaantota addunyaa yaadatame oola
Ijaarsi hidha haaromsaa guddichaa harkifate
Dubartiin UK sa'aatii 10 booda galaanarraa baraaramte